खराब राजनीतिले पछि पारिएको गुल्मी – Gulminews
Home/बिचार/खराब राजनीतिले पछि पारिएको गुल्मी
खराब राजनीतिले पछि पारिएको गुल्मी
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ मंसिर १, शुक्रबार २३:३६ मा प्रकाशित
गुल्मी जिल्ला आफैमा एउटा सुन्दर शान्त पहाडी क्षेत्र हो । गुल्मीमा पवित्र तिर्थस्थल रिडी र रेशुंगा अवस्थित छन् । त्यस्तै कफीको लागि पनि गुल्मी प्रख्यात मानिन्छ । तम्घास बाट करिब २० किलोमिटर को दुरीमा रहेको धुर्कोट बिचित्र गुफा पनि गुल्मी जिल्लालाई चिनाउने एउटा आधार हो ।
प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गुल्मी अन्य जिल्ला हरुको तुलनामा अबिकशित त विकट मानिन्छ । त्यसो त गुल्मी जिल्ला आफैमा शिक्षित जमात रहेको जिल्ला पनि हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपसचिब कुलचन्द्र गौतम केही पटक मन्त्री भएका गोकर्ण बिस्ट प्रदिप ज्ञवाली तथा विभिन्न सरकारी सेवामा सचिव-उपसचिबहरू सहित बग्रेल्ती सफल व्यक्तित्व गुल्मी जिल्लाले जन्माई सकेको छ । सायद गुल्मेलीहरू नपुगेको देश पनि कमै होलान् ।
गुल्मी जिल्लाको करिब ४० किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरिएको छ । भौगोलिक विकटता रहेको गुल्मीमा प्रतेक वर्ष करोडौको बजेट सडकको लागि भनेर पारित गरिन्छ । तर दीर्घकालीन सडक निर्माणको सट्टा राजनीतिक दलहरूका स्थानीय प्रतिनिधि मिलेर त्यसलाई बाडफाड गरी केही विकास गरे जस्तो गरेर अरू रकम पचाउने बानी परेको छ । तपाईँहरू अचम्म पर्नु पर्दैन पूर्व सफल ऊर्जा मन्त्री भनियका गोकर्ण बिस्ट को गृह जिल्ला को आधा भागमाअझैँ सम्म बिध्युत गएको छैन । खराब राजनीतिक व्यवस्थाका कारण जिल्ला का धेरै क्षेत्रहरू अझै अन्धकारमा रहनु परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य को नाममा बर्सेनि करोडौ बजेट छुट्टाउदा समेत त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । जिल्लामा राम्रो स्वास्थ्य संथा नभएकै कारण पाल्पा बुटवल र काठमान्डू धाउनु पर्ने बाध्यता छ।
जिल्लाको साबिकको क्षेत्र न ३ त झन् धेरै समस्याले ग्रसित छ न त कालोपत्रे गरेको सडक नै पुगेको छ न त कुनै ठुलो स्वास्थ्य संस्था छ न त गतिलो उच्च शिक्षाको लागि क्याम्पस । बर्सेनि उच्च शिक्षा को खोजीमा तम्घास पाल्पा बुटवल काठमाडौँ पलाएन हुने युवा दिनदिनै बढिरहेका छन् । यसरि सबै क्षेत्र मा पछि पारिएको गुल्मी जिल्लामा प्रशस्त सम्भावना हुदाहुदै पनि विकास र निकासको बाटो देखाउने नेतृत्व को कमी छ।
चुनावी समयमा भोट माग्न आउने विकास का सयौ सपनाहरू देखाउने एमाले काँग्रेस र आओबादिका नेता हरू चुनाव जिते पछि त्यस क्षेत्र को विकासमा कहिले ध्यान दिएनन । काठमान्डूमा आलिसान बंगला बनाउने गाडी किन्ने मात्र सपना बोकेर हिडे । त्यसैले हरेक गुल्मेली जनताले दुख पाउन परेको छ । राम्रो अस्पताल नहुदा अकालमा मर्नु परेको छ। युवाहरू उच्च शिक्षा लिन नसकेर खाडी मा धाउन परेको छ । हरेक वर्ष साघुरो सडकको कारण दुर्घटनामा परि अकालमै मर्न परेको छ । प्रशस्त स्रोतसाधन हरू भयपनी बिजुली नभएर अन्धकारमा बस्न परेको छ । प्रशस्त खाने पानी नपाएयर अझै खोला नाला हरुमा पानी खोज्दै हिड्न परेको छ । बेरोजगारीको समस्या झेल्न परेको छ ।
विकासमा ध्यान दिने नेतृत्वको कमीले गुल्मी जिल्ला पछि पारिएको हो ! खराब राजनीतिक प्रणालीले जिल्लामा दिनप्रतिदिन कमिसनखोर भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जानु पर्ने जरुरी छ ! युवा बुद्धिजीवी समाजसेवी सबै पक्षको समान हैसियत रहन्छ सम्बृद गुल्मी निर्माणमा ।
विभिन्न समयमा जनतालाई धोका दियर चुनाव जित्ने पद्धतिको सधैको लागि अन्त्य गर्नु जरुरी छ। त्यसैले यसपालिको प्रतिनिधिसभा त प्रदेश सभा निर्वाचनमा सही र सक्षम नेतृत्व चयन गरौँ । मिठा भाषण चिल्ला गफ ले हाम्रो गुल्मी बन्दैन नेता मात्र बन्छन ! गुल्मीको समग्र विकासको लागि सही सक्षम र सामर्थ्य भएको नेतृत्वको आवश्यकता छ ।